ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံလျှင် ပြုသင့်သော ကုသိုလ် ၁၀ မျိုး – Shwe Myanmar
Posted on January 17, 2021 January 17, 2021 by Shwe Myanmar
ဆင်းရဲဒုက္ခ ကြုံလျှင် ပြုသင့်သော ကုသိုလ် ၁၀ မျိုး
အရှင်ဘုရား ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတ်နိုင် သူများ ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့် အလုပ်မလုပ်နိုင် စားဝတ်နေရေးပါ ဒုက္ခရောက်ရသူများ ဘယ်လို ကုသိုလ်မျိုး ပြုသင့်ပါသလဲ ဘုရား-? အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ
လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်ဖို့လိုပါတယ် ဗုဒ္ဓစာပေမှာ…ပုည ကြိယ ဝတ္တုဆယ်မျိုးကောင်းသော အကျိုး၏ တည်ရာဖြစ်၍ ပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ ကုသိုလ်ဆယ်မျိုး ရှိကြောင်း ဖော်ပြ ထားပါ တယ်။
အဲဒီ ဆယ်မျိုး ကတော့
၁။ ဒါန =ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း။
၂။ သီလ =ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါးစသော သီလဆောက်တည် ခြင်း။
၃။ ဘာဝနာ =တရားဓမ္မ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခြင်း။
၄။ အပစာယန =အသက်သိက္ခာ ဂုဏ်ဝါ ကြီးသူအား အရိုအသေပြုခြင်း။
၅။ ဝေယျာဝစ္စ = သူများကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ ကူညီဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ပေးခြင်း။
၆။ ပတ္တိဒါန =မိမိရေသာ မိမိလုပ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအမျှပေးဝေခြင်း
၇။ ပတ္တာနုမောဒန =မိမိသို့ရောက် လာသော ကုသိုလ်အဖို့ တစ်နည်းအားဖြင့် သူများပြုသော ကုသိုလ်အဖို့ကို ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ယူခြင်း။
၈။ ဓမ္မဿဝန = တရားနာယူခြင်း။
၉။ ဓမ္မဒေသနာ =လာဘ်လာဘကို မငဲ့ဘဲ တရားဟောပြောခြင်း။
၁ဝ။ ဒိဋ္ဌိဇုကမ္မ = အယူဝါဒကိုဖြောင့်မတ် မှန်ကန်စွာ ပြုခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဆယ်မျိုးထဲက မိမိတို့ လုပ်နိုင်တဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကို လုပ်နေပါကလည်း ကုသိုလ် ဖြစ်နေပြီး ဘာမှ မလုပ်တာထက် စာရင် အများကြီး အကျိုးကြီး ပါတယ်။ ကုသိုလ်ဆိုတာ…လုပ်တတ်ရင် ယူတတ်ရင် ရပါတယ်။ လှူစရာမရှိလို့ ကုသိုလ် မရဘူး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ဒါနလုပ်မှသာ ကုသိုလ်ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆယ်မျိုးထဲမှာ လုပ်လို့ရတဲ့ ကုသိုလ်တွေ အများကြီးပါ။ မိမိတို့လုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်လို့ရတဲ့ ကုသိုလ်မျိုးကြိုးစားပြီး လုပ်နေမယ် ဆိုရင်အဆိုးထဲက အကောင်းဆိုသလိုကုသိုလ်တရား တိုးပွားနေမှာပါ။
မနာပ ဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ(ဒိုက်ဦး)
အရှငျဘုရား ဆငျးရဲနှမျးပါးပွီး ဆေးဖိုးဝါးခ မတတျနိုငျ သူမြား ကနျြးမာရေး မကောငျးလိျု့ အလုပျမလုပျနိုငျ စားဝတျနရေေးပါ ဒုက်ခရောကျရသူမြား ဘယျလို ကုသိုလျမြိုး ပွုသငျ့ပါသလဲ ဘုရား-? အဲဒီလို အခွအေနမြေိုးမှာ
လုပျနိုငျတဲ့ ကုသိုလျမြိုးကို လုပျဖို့လိုပါတယျ ဗုဒ်ဓစာပမှော…ပုည ကွိယ ဝတ်တုဆယျမြိုးကောငျးသော အကြိုး၏ တညျရာဖွဈ၍ ပွုသငျ့ပွုထိုကျတဲ့ ကုသိုလျဆယျမြိုး ရှိကွောငျး ဖျောပွ ထားပါ တယျ။
အဲဒီ ဆယျမြိုး ကတော့
၁။ ဒါန =ပေးကမျး လှူဒါနျးခွငျး။
၂။ သီလ =ငါးပါး၊ ရှဈပါး၊ ဆယျပါးစသော သီလဆောကျတညျ ခွငျး။
၃။ ဘာဝနာ =တရားဓမ်မ ကငျြ့ကွံ အားထုတျခွငျး။
၄။ အပစာယန =အသကျသိက်ခာ ဂုဏျဝါ ကွီးသူအား အရိုအသပွေုခွငျး။
၅။ ဝယြောဝစ်စ = သူမြားကုသိုလျကောငျးမှု၌ ကူညီဆောငျရှကျ လုပျကိုငျပေးခွငျး။
၆။ ပတ်တိဒါန =မိမိရသော မိမိလုပျသော ကုသိုလျကောငျးမှုကိုအမြှပေးဝခွေငျး
၇။ ပတ်တာနုမောဒန =မိမိသို့ရောကျ လာသော ကုသိုလျအဖို့ တဈနညျးအားဖွငျ့ သူမြားပွုသော ကုသိုလျအဖို့ကို ဝမျးမွောကျ ဝမျးသာ သာဓုချေါယူခွငျး။
၈။ ဓမ်မဿဝန = တရားနာယူခွငျး။
၉။ ဓမ်မဒသေနာ =လာဘျလာဘကို မငဲ့ဘဲ တရားဟောပွောခွငျး။
၁ဝ။ ဒိဋ်ဌိဇုကမ်မ = အယူဝါဒကိုဖွောငျ့မတျ မှနျကနျစှာ ပွုခွငျးတို့ ဖွဈပါတယျ။
ဒီ ဆယျမြိုးထဲက မိမိတို့ လုပျနိုငျတဲ့ ကုသိုလျမြိုးကို လုပျနပေါကလညျး ကုသိုလျ ဖွဈနပွေီး ဘာမှ မလုပျတာထကျ စာရငျ အမြားကွီး အကြိုးကွီး ပါတယျ။ ကုသိုလျဆိုတာ…လုပျတတျရငျ ယူတတျရငျ ရပါတယျ။ လှူစရာမရှိလို့ ကုသိုလျ မရဘူး ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ဒါနလုပျမှသာ ကုသိုလျဖွဈတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီမှာ ဖျောပွထားတဲ့ ဆယျမြိုးထဲမှာ လုပျလို့ရတဲ့ ကုသိုလျတှေ အမြားကွီးပါ။ မိမိတို့လုပျနိုငျတဲ့ လုပျလို့ရတဲ့ ကုသိုလျမြိုးကွိုးစားပွီး လုပျနမေယျ ဆိုရငျအဆိုးထဲက အကောငျးဆိုသလိုကုသိုလျတရား တိုးပှားနမှောပါ။
မနာပ ဒါယီ အရှငျဝိစိတ်တ(ဒိုကျဦး)
Previous PostPrevious ဗိုက်ကြောပြတ် ပေါင်ကြောပြတ်ပီး အသားအရည်တွန့်နေတာတွေအတွက် ဆေးကောင်းတလက်
Next PostNext ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်အား လခပ်လန်းလန်း ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတဲ့ မအေးသောင်း ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်